An Ultimate Tusaha Backing aad Mobile Phone
In noloshooda maanta, waxay noqotay mid aan macquul aheyn in ay ku noolaadaan iyada oo aan casriga ah iyo casriga ah waa ay ka buuxaan macluumaad muhiim ah. Xitaa fikir waayaan xogta naga dhigeysa walwalsan tahay. Ka hortag seenyadaa musiibo waayaan wax ka mid ah macluumaadka ay si joogta ah taageero aad telefoonka.
Waxaa had iyo jeer tahay mid amaan ah in ka badan hal nuqul ka mid ah xogta aad, iyo gurmad ay ku saabsan tahay dhammaan xogta muhiim nabad ilaalinta oo ay la socdaan nuqulo ka mid ah dhamaan macluumaadka laga yaabaa in aad u baahan tahay waqti ka mid ah mustaqbalka. Your casriga ah ula xidhan aqoonsiga ka badan your computer yahay. Sidaas, waxa ay dib u kor joogto ah oo aad naftaada uga hanjabaad kasta oo suurta gal badbaadin. Aan fahmaan qaababka kala duwan ee isticmaala inay xogta telefoonka mobile gurmad.
Wixii macruufka Users --iCloud
Wixii Users Android --Google nidaameed
Wixii qalab Symbian Users-- Symbian
Wixii Manager Users Blackberry --BlackBerry Desktop
One Stop Xalka in kaabta Phone
Backing qalabka macruufka ah si loo ilaaliyo xogta aad waa u fududahay. Haddii aad ka heli arrin la qalab aad, aad u soo celin kartaa waxyaabaha ku yimid gurmad. Waxaa jira saddex siyaabood oo waaweyn in ay dib ilaa qalabka macruufka. Mid ka mid ah si toos ah waa ka qalabka la isticmaalayo Apple ee iCloud; marka labaad waa in si toos ah adiga oo isticmaalaya computer Lugood, iyo mid saddexaad waa hab isku mid ah labada doorasho.
Apple waxay bixisaa 5 GB ee bilaashka ah iCloud kaydinta laakiin ha ka welwelin aad u cusboonaynta karaa inta dheeraadka ah aad bixiso kharashka.
• 20 GB waa u $ 0.99 bishii.
• 200 GB waa u $3.99 bil ah.
• 500 GB waa u $ 9.99 bil ah.
• 1 TB waa u 19,99 bil ah.
Si aad u awood gurmad iCloud, Tag ka Settings app iCloud kaabta . Saxiix galay iCloud la ID Apple aad ka dibna Tubada kaabta Hadda si loo bilaabo nidaamka taageerto kor.
Marka qalab aad waa gudahood ah network Wi-Fi oo ku xiran USB, hayaan xiga waxaa si toos ah ay sameeyeen. Waxaad xitaa gacanta u bilaabi karto qaadashada gurmad by siyoodba kaabta Hadda. iCloud waa xal la yaab leh u isticmaala oo aan si joogto ah u xirmaan ay qalabka ay computer. Waxay u baahan tahay awood la xidhiidha iyo USB Wi-Fi in ay dib u kor xogta aad si toos ah. iCloud bixisaa gurmad ah oo dhamaystiran, si xogta user waa ammaan si kasta. Ayaa gurmad iCloud ka mid ah wax walba oo ay ku jiraan xiriiro, jadwalka taariikhda, camera oo duudduuban, goobaha, iyo xogta app. Khasaare kaliya ku kooban yahay kaydinta lacag la'aan ah.
Google nidaameed waa adeeg ka timaada Google iyo isku xidhka dhammaan xogta iyo macluumaadka galay hannaanka Google isticmaalaya xisaabtaada Google. Isticmaalka Google nidaameed aad dib kartaa: App Data, Xiriirada, Calendar, Chrome, Docs, Drive, Gmail, Google Opinion Abaalmarinta, Google Fit, Google Play Books, Google Play Music, Google Play Newsstand, Google Play Movies & TV, Goolge +, Photos Google+, Google+ Uploads, kuwan raadkaygay, Google dhig, My GoogleDrive, faahfaahinta Dadka, News & Weather, iyo Waajibaadka.
Dhamaan waxyaabaha kuwan waxaa synced guud ahaan qalabka kala duwan ayaa aad u saxiixay in la account isla Google guud ahaan qalabka oo dhan.
Waa sahlan tahay in la dhiso. Si aad u qotomiyey, Tag Settings Accounts Dooro Google Dooro Google Accounts oo aad sameysatid doorashooyin u hagaagsan aad.
Si aad dib ilaa sirta Wi-Fi iyo goobaha kale, u tag Settings kaabta & Dib u celi ka dibna adiga oo riixaya " kaabta xogta aan "iyo xulashada xisaabtaada Google.
Kaabta xogta telefoonka aad ku xiran tahay astaanta ah ee dukaamada iyo qolof Symbian. The Nokia OVI Suite buuxiyo baahida. Waxaa ka buuxa, iswada gurmad Suite by Nokia. Negative kaliya ee software tani waa ay u shaqayso oo kaliya la PC iyo telefoonada Nokia.
Si aad u isticmaasho - rakibi Suite iyo surin phone Nokia ee via USB, iyo raacaan Dardar ah. Waxaa hayn doonaa xiriirada, waxyaabaha jadwalka, iyo warbaahinta xoojiyaa. Users Non-Nokia Symbian users-Samsung isticmaali kartaa app bilaash oo la yidhaa Symbian Tool ayaa. Qalabka Symbian bixisaa nuqul image buuxa ka telefoonka, taasi macnaheedu waa in aad soo celin kartaa telefoonka saxda ah ee uu gobolku waxa uu ahaa in waqtiga gurmad.
Tababare BlackBerry Desktop ka mid ah dadka isticmaala Blackberry oo caan ah. Iyadoo tababaraha Desktop Blackberry, aad gurmad smartphone Berry madow xogta aad sida aad Xiriirada, Messages, Calendar, Settings Profile, iwm Hel faylasha aad anfacaya leh si guul leh u fidinno ID BlackBerry aad la BlackBerry App Adduunka.
Step1 : First of dhan, rakibi codsiga.
Talaabada 2 : Hadda, hoos "kaabta," dooro "Options," (In doorasho, waxaad cayimi kartaa sirta iyo nooca xogta koobin)
Talaabada 3 : Guji "Back Up," dooro caga aad gurmad. Waa file hal, sidaas darteed waa u fududahay inay ku tuuraan on disk drive dibadda adag, ul USB ah ama kaarka microSD kaydinta ammaan ah.
Voila! Tani waa. Waxaa kaliya hab sadex talaabo ah. Waa fudud iyo sida ugu fiican in ay dib u kor xogta aad blackberry.
Wondershare MobileTrans waa 1-Click codsiga gurmad telefoonka. Waxaa taageeri karaan qalabka Android, macruufka iyo Symbian gurmad. Macluumaadka telefoonka ee kaabta iyo dib u soo celineysa effortlessly la this qalab cajiib ah. Xiriirada Transfer, fariimaha qoraalka ah, abuse wac, jadwalka, photos, music, video iyo barnaamijyadooda u dhexeeya - mid ka mid click fudud!
Phone Mobile kaabta ka mid Click!
Copy Xiriirada, SMS, Photos aan Loss kasta.
Ilaa Taageerada in 3,500+ Popular Qalabka & nidaamyada hawlgalka dambeeyay.
Dib xogta aad ka Phone ee Old una soo celiso qalabka New ka dib.
Bedelka content dhexeeya macruufka, Android, Symbian iyo Blackberry.
Taageerada in permantly masixi telefoonada jir.
Tallaabooyinka lagu kaabta Data Phone in Computer ah:
Step1 : Ku rakib MobileTrans on your computer oo isku xigta. Orod codsiga halka aad telefoon macruufka, Android, ama Nokia ku xiran computer la cable USB.
Step2 : On Menu Home ah, dooro ikhtiyaarka ah ee kaabta in aan bilowno Panel ee kaabta. Hubi xogta oo dhan aad rabtid in aad gurmad iyo riix Start Copy. MobileTrans Ayaa bilaabi doona in ay dib u up ka kooban loo doortay in ay kombiyuutarka. Waxaad markaas ku badbaadin karto xogta gurmad ah oo ku saabsan meesha aad joogto ah iyo u isticmaalaan mar walba.
> Resource > Top List > Tilmaan kama dambaysta ah in ay taageero aad Mobile Phone